Turkiga oo loogu hanjabay arrin saameyn weyn ku yeelan karta | Baligubadlemedia.com
Turkiga oo loogu hanjabay arrin saameyn weyn ku yeelan karta
Marka Turkiga ee sahminaya gaaska badda
Madaxa siyaasadda arimaha dibadda ee Midowga Yurub Josep Borrell ayaa uga digay Turkiga in uu wajihi doono cunaqabateyn hadii uu sii wado “ficillada gardarada ah ee bariga badda Mediterranean-ka ay ka wadaan sida uu hadalka u dhigay.
Tallaabooyinka soo socda ee Midowga Yurub ayay u badantahya in looga wada xaajoon shir ay yeelanayaan wadamadaan oo dhacay 24- bisha September ee soo aadan .
Waxaana looga golleeyahay tallaabooyinkan in lagu xakameeyo awoodda Turkiga uu ku baadi goobeyo gaaska dabiiciga ah ee biyaha la isku haysto.
Afhayeen u hadlay Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga oo lagu magacaabo Hami Aksoy, oo ka hadlay arrintaan ayaa yiri, “Midowga Yurub awood uma lahan inay dhalleeceeyaan howlaha batroolka ee ka socda gudaha dalkeenna waxaana ka dalbaneynaa in ay joojiyaan arrintaan”.
Mr Borrell iyo wasiirka Arimaha dibadda ee Jarmalka Heiko Maas ayaa carabka ku adkeeyay in Midowga Yurub uu doonayo in uu siiyo fursad wada hadal si loo xakameeyo xiisada u dhaxeysa Giriiga iyo Turkiga oo labaduba xubno ka ah gaashaan-buurta NATO.
Qoraalka sawirka,Markabka Shidaalka qoda ee Turkiga